GreenKhabar – गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपचार विधि!!
in मूलपेज / स्वास्थ्य — by GreenKhabar —	April 30, 2017
यसो गर्दा वान्ता हुने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
अदुवा आर्युवेदिक औषधिमा समेत अति नै प्रयोग गरिन्छ साथै रुघा खोकी, अरुची आदिमा पनि अदुवाको प्रयोग गरिन्छ । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अदुवामा वान्ता रोक्ने औषधीय गुण हुन्छ । यसरी यात्राका क्रममा अदुवाका टुक्रा मुखमा राखेर चुसिरहँदा वान्ता हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा